भर्खरै झापामा घट्यो दुखद घटना, खबर थाहा पाउने बित्तिकै प्रहरी घटनास्थलमा पुग्यो ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/भर्खरै झापामा घट्यो दुखद घटना, खबर थाहा पाउने बित्तिकै प्रहरी घटनास्थलमा पुग्यो !
भर्खरै झापामा घट्यो दुखद घटना, खबर थाहा पाउने बित्तिकै प्रहरी घटनास्थलमा पुग्यो !
काठमाडौँ । झापाको चारपानेमा एक पुरुषको श व फेला परेको छ । प्रहरीले उनको शव संकास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटना प्रकृति हेर्दा ह त्या गरेको देखिएकाले प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । परिचय खुल्न नसकेको पुरुष अन्दाजी ४० वर्षका देखिन्छन् ।
स्थानीयले मङ्लबार बिहान श व देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । श वमा घाउ चोट देखिएका कारण प्रहरीले ह त्याको आशंका गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत पुरीको तारिफ गर्दै किन दिए स्नेहोपहार ?
कुवेतमा जारी कर्फ्यू आगामी साता हट्ने, नेपालसहित ३१ देशको प्रतिबन्ध नहट्ने